Greece idume izihambi yayo amakhulu eminyaka, ukuhlangana njalo ngonyaka izinkulungwane zezivakashi. isiqhingi ezidumile ikakhulukazi saseKrethe bemvelo olunothile. Greece has amahhotela eziningana ezahlukene zitholakala, efanelekayo sokuzilibazisa nemphambosi yekwentiwa eziphumulele. izivakashi eziningi zikhetha Happy Days Hotel 3 *. Intengo ukuvakasha kuhlanganisa ukudla, indawo yokuhlala, izindiza, Ukudluliselwa ehhotela nasemuva, umshwalense wezokwelapha kanye lomshuwalense nevyleta nganoma yisiphi isizathu. indawo Ihhotela likuvumela izivakashi ngokukhululekile futhi ngesikhathi esifushane ukuya nokuzwa saseKrethe ngemoto noma izithuthi zomphakathi.
Leli hhotela ubizwa ngokuthi jikelele, njengoba noma ubani uzothola okuthile lapha okuthile kwawo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi esikuthandako. Happy Days Hotel 3 * itholakala ngasogwini edolobhaneni Kavros, endaweni ethule futhi remoteness endaweni eqhelelene nedolobha elikhulu. Lapha ungakwazi ngempela ukujabulela ukuthula futhi sivumelanise imicabango ukuze. Ibanga sezindiza nomuzi Chania, 45 angu kude. izivakashi eziningi hamba bethenga futhi eziyisikhumbuzo e muzi aseduze Ratimno lapho ethekwini futhi. Ihhotela Happy Days Hotel 3 * selikhanyise amathathu phansi, ikheshi, namakamelo 80 ukhululekile. isakhiwo Isakhiwo kuyinto kubenzima. Holidaymakers zifeziwe kusuka ngoNdasa ngasekupheleni kukaMfumfu. Animation ngeke kukhanye up isikhathi sokungcebeleka iyiphi izivakashi, ngisho nomncane. Abasebenzi nsuku ulungiselela imincintiswano, izigcawu ezihlekisayo ezihilela izivakashi. Vala leli hhotela esitolo ezishibhile, lapho izivakashi ozothola izinto ezidingekayo, ubumnandi oyifunayo, eziyisikhumbuzo nokunye okuningi.
Ihhotela ukuphelela ukuba wamukeleke, romantic uhambo nomndeni isikhathi. Kuzo zonke amakamelo uzothola ifenisha yesimanje futhi ukhululekile, ingaphakathi umbala esiliva-grey stylish, kuvulandi ivulekile noma ithala ukubukwa emangalisayo-panoramic. Ukuze induduzo izivakashi Happy Days Hotel 3 * inikeza hairdryer, zokugeza ezidingekayo futhi Izinsiza eziyisisekelo ezifana eshaweni, air conditioning kanye ephephile. I balcony kukhona amatafula nezihlalo, lapho izivakashi eziningi ukuchitha isikhathi sabo ngengxoxo emnandi.
amakamelo eziningana eziklanyelwe ukuhlala umndeni, ne kuzo engcono - 4 abantu. Kulezi amakamelo zitholakala iziponji. Zothando kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza igumbi nge izinga eliphezulu wenduduzo, ine indawo 25 m2. Kulokhu, uzokubona umbono omuhle kolwandle. Standard Room siyindlela ohlelweni lokusetshenziswa kwemali kakhulu, it angazamukela abantu abane. Naphezu kweqiniso lokuthi lingakanani kancane lincane sokunethezeka, uhlale khona ntofontofo kakhulu. amakamelo Ingxenye ejwayelekile ifakwe imibhede emibili double. ezifuywayo Joint kuvumelekile. I ethile kuphela ukungabi izimo ezifanele labakhubazekile. Kusihlwa noma yesimo sezulu esibi, abanye izivakashi ukubukela cable TV. Phakathi iziteshi, kukhona Russian. Ukuze ukusetshenziswa air conditioning ngemali eyengeziwe.
Kulabo ukufunda ulwazi mayelana Happy Days Hotel 3 Izibuyekezo kukhona ezibaluleke kakhulu. Ngokuvamile, bonke ezihlobene nokudla okunomsoco, okuyinto olunikezwa ihhotela. Izivakashi ukujabulela ezihlukahlukene ukudla nsuku zonke, uhlelo "Zonke womanyano" uyakwazi ukwanelisa noma isiphi isicelo. On the lezitsha uvezwa ngesiGreki nje kuphela kodwa futhi ukudla emhlabeni jikelele. Ekamelweni lokudlela ivulwa 10 ekuseni kuya ku 22:00. Kubalandeli of dinner ngasekupheleni kukhona uhlelo "Ultra Zonke womanyano". Kulokhu, udaba ukudla kwenzeka kuze 24:00. Kanye nokudla anikezwa iwayini zendawo ubhiya, kanye tekukhipha iziphuzo ezibandayo. Ukuze izivakashi abasebasha izisebenzi ehhotela kuzoletha highchairs.
Happy Days Hotel ziyojabula izivakashi futhi imishini angaphandle, uyakwazi upende ezokungcebeleka abahambi. Ihhotela kanye indawo eduze ubukeka ngempela ivumelane ne kahle wacabanga. Wamukelekile edilini amahora angu-24, kukhona inkonzo exchange. Ukuze izimoto kukhona yokupaka. Laundry ukhulula izintokazi amahle kusukela ilondolo eholidini. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, endaweni yokucima ukoma, ukunikela cocktail okumnandi futhi ingxenye enkulu okumnandi cuisine InterContinental ngokumelene okwenza kolwandle. Uma sicabanga ngakho konke izinzuzo ngenhla, kulula ukuchaza ukuthandwa Happy Days Hotel. Rhodes edonsela izivakashi. Ihhotela lamukela inkokhelo ukheshe noma ikhadi plastic. Izingane ukuchitha isikhathi sabo ngendlela angenasawoti ichibi elincane noma ebaleni lokudlala.
Esitezi uzothola lounge nezinezingadi ezithambile SOFAS ukhululekile futhi amatafula amancane. Izivakashi alindele settlement lapha egumbini noma nje ukuchitha kusihlwa.
At amamitha 100 kusukela hhotela ebhishi ehlanzekile sandy nge sun bed futhi baphathe nezambulela. Ngena olwandle ayijulile, ngakho ungakwazi ukubhukuda ne izingane. Ibhishi izambulela futhi sunbeds ayatholakala ngemali eyengeziwe. Ngesikhathi sebehlezi ogwini nsukuzonke kukhona isikhumbuzo nabathengisi, abantu ngokunikezela ukuthatha isithombe nge izilwane ezihlukahlukene. Abantu abadala abangaqondi ukuthi ufuna ukuchitha isikhathi olwandle, ukubhukuda echibini elikhulu esizeni. Kulokhu, zonke imibhede nezambulela amahhala.
Njengoba kunjalo kubo bonke abanye ehhotela, lapha uzothola eziningi izindlela yokuchitha isizungu kumnandi. Outdoor yokubhukuda niqabuleke kushisa, chess, izikhali Backgammon ukuqeda isizungu. Ihhotela ngisho has a playroom ekhethekile. Nsuku zonke labetibambile ephathini ebhishi nge DJ futhi club umculo. Cishe njalo ngesonto, isibhakabhaka lihlotshiswe iziqhumane zemikhosi. Izivakashi ungabonisa amakhono abo vocal osemcimbini karaoke.
Uma wenza imali ehhotela izivakashi zisebenzisa itafula pool nganoma yisiphi isikhathi. Ithenisi yetafula ne-volleyball futhi anikwa imali. Izivakashi, kukhona inani elikhulu hambo, ukudluliswa oyimfihlo sezindiza, imihlangano ibhizinisi noma imikhosi.
Fans of the more ukuzijabulisa mobile kuyakhuthazwa uzame ngokwakho diving. Nomfundisi ofundisa abanolwazi ukuchaza ngokuningiliziwe inqubo zabo futhi bazibekele isibonelo yini okufanele uyenze. Ubuhle olwandle, futhi izwe wayo othakazelisayo kwamanzi ngeke abashiye ubani nandaba.
Okuningi ezemidlalo mobile ezifana kite futhi windsurfing, bekwi endaweni ebhishi ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe. Abafisa ukuhlola amandla abo ekulweni amagagasi untamed nomoya uhlale kakhulu.
Ukuze emabhayisikili kancane imali ezenziwe, lapho izivakashi ukwenza uhambo cwaningo, waya esiGodini Butterflies, lapho ukuphila owakhileyo emangalisayo egqamile, noma ngasogwini, okwenza check-in Kremasti futhi inhloko-dolobha, lapho le nqaba ephakathi. Ngokuvamile wavakashela yizivakashi futhi Paradisi Pastida, ngokuba nesithakazelo izici kweminye yale mizi.
Ngemva kuvulwa Happy Days Hotel Crete 3 baba ethandwa kakhudlwana iholidi. Lona isabelomali hotel kuphela Greece ngengqalasizinda ezinjalo.
Izivakashi ucime ukoma kwelinye Amabha amabili: emaphakathi kanye pool. Uhlelo "BONKE womanyano" mahhala okulandelayo iziphuzo: akukho utshwala, amanzi carbonated futhi plain ukuphuza, ayo, zonke izinhlobo ubhiya, iwayini, aperitifs, cocktail, ikhofi, ushokoledi ashisayo kanye nobisi. Noma ubani angakwazi noma nini ukusebenzisa izinkonzo uweta wotshwala enkantini. 22:30 iziphuzo baqiniseka mahhala, futhi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube 1:00 uthenga cocktail nokuningi.
"Ultra BONKE womanyano" uhlelo kuhlanganisa ngaphezulu utshwala neziphuzo okulungiselelwe ngesisekelo vodka, i-gin, utshwala, i-tequila, futhi abanye.
EGrisi, ujabulele ukubuka indawo ekhangayo, ngeke kube nzima. It izici engadini esophahleni, lapho izivakashi ukwenza nsuku zonke kusihlwa (noma ekuseni) uhambo. Crete idume ezihlukahlukene zalo ezinkulu izitshalo, okuyinto abendawo ozama ukulondoloza. Ezinye zazo zitholakala engadini ebusika Happy Days Hotel Theologos 3 *.
Ngaphambi ukuthuthela egumbini kufanele baziswe isidingo ukumthola uhlaka ke kuyokunikeza esikhathini esifushane. Ukuhlanzwa amakamelo kanye noshintsho nelineni Izisebenzi saziso. Igumbi ngalinye has a inombolo yefoni lapho ungaxhumana abasebenzi ukwamukela oda okuthile. Yonke abasebenzi hhotela friendly futhi njalo ube nomusa. Happy Days Hotel 3 (Rhodes) ngeke kusimangaze izivakashi ukudala izimo ukuhlala. Ikamelo ihlale ihlanzekile futhi zikhululekile.
Uma ufuna ukuvakashela izwe efana Greece, 3 * Happy Days Hotel uzokunika touch esengeziwe injabulo emizweni ezimnandi. Ngaphezu lolwandle yokwenziwa ukuzilibazisa izivakashi uzothola lokujwayela amasiko endawo, cuisine zendawo ukunambitheka. Lolu hambo ngeke zikhunjulwe isikhathi eside. Izindleko sokuhlala elilodwa omdala ehhotela izinsuku 8 imayelana 30 000 ruble. Ngezinye niche izindawo ezihlukahlukene, ungakwazi ukufunda Izibuyekezo zezivakashi Russian. Izivakashi uthi inkonzo enhle kakhulu nokudla izinga. Okuwukuphela ethile - akukho imibandela ekhethekile ukuhlala kwabantu abakhubazekile. Ngo izimpendulo zabo izivakashi belulekwa ukuba uvakashele Happy Days Hotel.
Thina ukuhamba ndawonye: France ezikhangayo
Wonderful Slovenia. Visa izivakashi
Insect ewusizo. I-ladybug, i-beetle, inyosi, i-lacewoman. Abavikeli bensimu kanye nensimu
Ivanovsky Sezindela eMoscow: ikheli, izinkomba kanye nezithombe
Ukuthi baziphathe kanjani embhedeni zezinkanyezi: sexy ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Wesifunda Russian emlandweni New York, "Little Odessa"
Borsch nge iklabishi fresh - isidlo inombolo eyodwa phezu kwetafula
Ukubona Chichikov. Indatshana ku "Ukubona Chichikov -" Knight penny ""